Flash The |
Flash The waxaad qaadataa in ay ku fuushaa magaalo sida aad adigoo nin ugu dhaqsiyaha badan dhulka jiro in uu badbaadiyo ilbaxnimo ka dambiilayaasha caan. qof ee Barry Allen waa mid ka mid ah jilayaasha ugu caansan ee lagu qoslo DC oo taxane maadda ah American. Captain Cold, Mirror Master, iyo goriilla Grodd waxaa lagu taswiiray sidii dambiilayaasha ee ciyaarta oo mid kasta oo iyaga ka mid ah waxay bixisaa muuqaalada badan bonus xiiso leh oo dhan Afyare.
abuure ee booska cajiibka ah waa ay ciyaareyso ay Series. Shirkadda waa galay horumarinta iyo qaabaynta software ciyaaraha for kulan casino tan 1999. Games like Flash The isu caddeeyaan in industry ee. Shirkadda waxaa had iyo jeer ku dadaalaya dhinaca dhismaha ay ganacsi by fikirka siyaabo cusub oo xiiso leh oo ay kulan oo ay xiiso-buuxiyeen halka maalin walbo waxa aasaaska u ah ciyaaraha Afyare. Shirkadda waxaa nidaaminaya by komishanka khamaar UK.
Waxaa loo badan 5 duntu, Flash The dalabyo 50 paylines. The calaamad bonus Wild waa Flash The icon kaas oo caawiya barbaro baxay isku guuleystay idiin la 3x multiplier a. Astaanta firdhin waa kale icon Flash hillaac. Waxay bedeli karaan dhamaan calaamadaha kale ee bonus iyo astaanta duurjoogta ah iyo dalab laga reebo 5000 qadaadiicda haddii aad maamuli si loo arko laba ka mid ah oo ku saabsan guusha payline.
The feature of bonus bets in the game brings more wild symbols and hence more winning combinations are up for grabs. Waxay bixiyaan multiplier a 5x si guul oo dhan. The dhigeeysa free Guuleysatay si kastaba ha ahaatee ku siin 10x multiplier ah guul aad. The calaamado kale waa calaamado kaarka caadiga ah. Waxaa ka mid ah qaababka kale oo xiiso leh waa Wilds iyo anshaxa xun ee feature. Helitaanka 3 ama calaamadaha gunno dheeraad ah oo ku duntu lagu jiro khamaar ah bonus feature, aad la caadaysteen in ay Cold Captain ah, goriilla Grodd , iyo Mirror Master ee feature. Captain Cold waxay bixisaa baraf wilds ballaarinta leh dib-u-wareejin free. goriilla Grodd, Si kastaba ha ahaatee, ku siinayaa teleporting a random wilds muuqdo iyo Mirror Master ka dhigaysa in aad dib u eegaan aad ee la soo dhaafay 4 dhigeeysa free.
Raadinta at badan muuqaalada xiiso leh in Afyare, Flash The waa hit weyn ee suuqa. Sidaas, aad qarka u batay guuleystay! Waxaad soo dhaweeyay tayada sawirka la yaab leh, codka cajiib ah iyo muuqaallo ka duwan in booska this. waxaa saaran in aad ka naqshadeynta 3D cajiib ah oo jaakbotyada dabcan weyn jecel, si aad hubaal ma sugi karo in ka badan!